Tetikasa 25 tetikasa fanoharana momba ny trondro | Famoronana an-tserasera
Tetikasa 25 tetik'asa fanehoana hevitra
Pablo Gondar | | mpanakanto, sary, Inspiration
Sary an'ohatra inona no tadiavinao milalao hevitra ary ny sary amin'ny fomba azo atao a fifandraisana madinidinika eo anelanelan'ny sary. Ity tetikasa misy sary ity dia mampiseho antsika a sary tsy fantatra milalao teknika samihafa, manomboka amin'ny sary ka hatramin'ny sary nomerika.
Tena tsara ilay tetikasa fanatanjahan-tena mamorona izany dia afaka vitan'ny artista na mpamorona rehetra te-hamantatra ny fahaizany mamorona. Ny hevitra dia mieritreritra hevitra iray ary tadiavo ny fomba firesahana momba an'io hevitra io nefa tsy aseho azy mivantana, lalaovinao ny sary sy ny dikany izay anananao.
Tetikasa fanoharana ohatra
Nanangana ny foto-kevitry ny "trondro" ho toy ny teboka fanombohana hamoronana ireo fitaovana sary mifototra amin'ity teny ity. Milalao miaraka amin'ny toetra mampiavaka, fomba, hevitra ary karazana fifandraisana mahaliana rehetra hiresaka momba an'io hevitra io nefa tsy manao azy.
Fantatsika daholo izany trondro manana fahatsiarovana fohyIzany no antony nampiasana ny hevitra fahatsiarovana aotra mba hanehoana ny fifandraisana voalohany amin'ny fihevitry ny trondro. Araka ny hitantsika amin'ny sary etsy ambany, ny ampahany hita maso amin'ny sary dia lalaovina ihany koa, natao ihany koa izany manintona nefa misintona. Amin'ity tranga ity dia lalaovina ilay andian-teny mahazatra "Manana fahatsiarovana trondro ianao"
Amin'ity sary manaraka ity dia hitantsika ny fomba anehoan'ilay fanoharana amintsika ny afisy sarimihetsika malaza, amin'ity tranga ity dia milalao teny ary miaraka amin'ny lohatenin'ny sarimihetsika hiresaka momba ny foto-kevitry ny trondro nefa tsy manao izany.
Amin'ity fanoharana manaraka ity dia hitantsika ny fomba foto-kevitra an-dranomasina amin'ny endriny manerantany miaraka amin'ny foto-kevitry ny trondro, amin'ity tranga ity, ny ranomasina dia fitoeran-javatra ipetrahan'ny trondro. Ato amin'ity sary ity, ny sary dia tsy azo ovaina mampiseho amintsika ny hevitry ny fametrahana trondro ambanin'ny ranomasina.
Sekolin-trondro mety ho zavatra maro izy io, dia mety ho sekolin-trondro na sekoly mahazatra misy trondro. Ity sary ity dia milalao miaraka amin'ny fifandraisan'ny teny hoe banky (seza) ary ny sekoly (trondro), mampiseho sekoly mahazatra amin'ny fomba tsy miova.
Ity tetik'asa ity dia fomba tsara iray mampiofana ny fahaizantsika mamorona amin'ny fomba mahafinaritra sy hafa, ny idealy dia mitady hevitra misimisy kokoa ary misolo tena azy ireo amin'ny fomba samihafa.
Raha te hahita fanoharana bebe kokoa ity tetik'asa ity dia azonao atao eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Tetikasa 25 tetik'asa fanehoana hevitra
Bokin-tsarimihetsika mitsikera ara-tsosialy sy ara-politika ny sary an-tsary